Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tsy misy onitra! Miatrika 40 taona an-tranomaizina ny minisitry ny fizahantany Zimbaboe
Ny minisitry ny fizahantany ho an'ny Zimbabwe Prisca Mupfumira dia hiatrika famonjàna 40 taona, araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana.
Nampangaina i Mupfumira noho ny resaka fanararaotam-pahefana nataony tamin'ny birao rehefa avy nilaza fa naka vola mitentina 100 tapitrisa dolara amerikana izy nandritra ny naha minisitry ny asam-panjakana teo ambany governemanta Mugabe azy.
Taorian'ny fisamborana azy farany teo, ny mpampanoa lalàna (PG) Kumbirai Hodzi dia namoaka taratasy fanamarinana manasokajy ny raharahany ho toy ny sarotra iray mitady azy higadra mandritra ny 21 andro raha eo am-panombohana ny fanadihadiana, tranga tsy manam-paharoa amin'ny fampanoavana ao amin'ny firenena. Nandritra ny fotoam-pitsarana azy teo am-pelatanan'ny mpitsara ny fitsarana mpitsara Erica Ndewere ny alatsinainy teo, ny fanoherana dia nanome fanoherana ny famotsorana azy noho ny filazany fa ny fanadihadiana natao dia nahitana heloka bevava marobe nambaran'ny minisitra talohan'ny naha minisitry ny fizahantany azy.
Nametraka ny famotopotorana fa ny mpangataka dia manana kaonty banky CBZ manokana 04422647590013 izay nandefasana vola mivantana.
Mety hiatrika fiampangana telo farafahakeliny ny minisitra ao anatin'izany ny fisolokiana, fanodikodinam-bola ary fanararaotana amin'ny asany ny birao. Nahasarika 25 taona an-tranomaizina ny famotsiam-bola, nahasarika 15 ny fanararaotana
Mupfumira dia miatrika fanararaotana amin'ny asa ratsy ataon'ny biraom-panjakana mitentina 95 tapitrisa dolara amerikana.
Notazomina izy tamin'ny herinandro lasa teo taorian'ny niantsoan'ny fanjakana ny andininy faha-32 amin'ny lalàna mifehy ny heloka bevava sy ny porofo manamarina izany, izay mamela azy hitady ny fitazomana bebe kokoa ny olona ahiahiana hatramin'ny 21 andro hanaovana fanadihadiana bebe kokoa.